ယူရိုဗိုလ်လုပွဲတွင် အင်္ဂလန်ကို အနိုင်ယူပြီး မိမိတို့အား ကယ်တင်ရန် အီတလီကို စကော့တလန်သတင်းစာတောင်းဆို – Play Maker Sports Journal
ယူရိုဗိုလ်လုပွဲတွင် အင်္ဂလန်ကို အနိုင်ယူပြီး မိမိတို့အား ကယ်တင်ရန် အီတလီကို စကော့တလန်သတင်းစာတောင်းဆို
စကော့တလန်သတင်းစာ The National ဟာသူတို့ရဲ့စာမျက်နှာမျက်နှာဖုံးတွင် Save us Roberto,you’re our . . . final hope ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် “We can’t take another 55 years of then banging on about this.” လို့ရေးထားပါသေးတယ်။
ယူ႐ိုဗိုလ္လုပြဲတြင္ အဂၤလန္ကို အႏိုင္ယူၿပီး မိမိတို႔အား ကယ္တင္ရန္ အီတလီကို စေကာ့တလန္သတင္းစာေတာင္းဆို
စေကာ့တလန္သတင္းစာ The National ဟာသူတို႔ရဲ႕စာမ်က္ႏွာမ်က္ႏွာဖုံးတြင္ Save us Roberto,you’re our . . . final hope ဆိုၿပီးေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။ဒါ့အျပင္ “We can’t take another 55 years of then banging on about this.” လို႔ေရးထားပါေသးတယ္။
ယူရို ဗိုလ်လုပွဲတွင် အင်္ဂလန်အသင်းကို ရင်ဆိုင်မယ့် အီတလီပွဲထွက်လူစာရင်းပေါက်ကြားလာ
သမိုင်းသစ်ရေးထိုးကြရန် အင်္ဂလန်အသင်းကို ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီး တိုက်တွန်း